Tag: Rotator sary | Martech Zone
Tag: Rotator sary
Mampahafantatra ny Widget Rotator an'ny Sary WordPress
Alarobia, Desambra 14, 2011 Talata, May 3, 2016 Douglas Karr
DK New Media efa elaela no nanana an'ity plugin WordPress ity tao amin'ny back-burner. Ny fangatahana plugin rotator sary tsotra sy kalitao dia avo tsy ho an'ny mpanjifanay ihany fa ho an'ny fiarahamonina WordPress. Ny plugins hitako izay nampanantena fa hanao izay ilainay dia tapaka na tsy mandeha mihitsy. Ka nanao ny anay izahay. Ratsy ilay kinova voalohany, ary vokatr'izany dia tsy nanampy ny WordPress Plugin Repository mihitsy.